မိတ်ဆွေတုတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့ ပေါက်ဖော်တို့ အရေးကြုံရင် အားကိုးစရာ လူရှိပါ့မလား? - Zet Star
မိတ်ဆွေတုတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့ ပေါက်ဖော်တို့ အရေးကြုံရင် အားကိုးစရာ လူရှိပါ့မလား?
တရုတ် သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် ၏ UN General non-assembly တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းပါ မိမိနိုင်ငံသည် နိုင်ငံစုံ ပူးပေါင်းရေး မူဝါဒ ကို အလေးထားသွားမည် ဆိုသည်ကို အမေရိကန်က ပယ်ချလိုက်ပေသည်။ ထို့သို့ ရဲရဲတောက် ထုတ်ပြောလာသူသည်က နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက် ပွန်ပီယို၏ မူဝါဒ ရေးရာ အကြံပေး တရုတ်ပြည်ဖွား မိုင်းလ် ယူ ပင် ဖြစ်သည်။
ရှီကျင့်ဖျင် ပြောသည့် နိုင်ငံစုံ ပူးပေါင်းရေး မူဝါဒ ဆိုသည်က မိမိတို့ တန်ဖိုးထားသည့် အကြောင်းချင်းရာများကို ဝေမျှခံစား နိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဂျပန်၊ ဩစတေးသျှ၊ ‌ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ နေတိုး နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ အားလုံးသည် မိမိတို့နှင့် တန်ဘိုးထားသည့် အရာများ တူညီသော နိုင်ငံများသာ ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းတွင် တရုတ် အဖို့ အစစ်အမှန် ယုံကြည်ရသည့် မိတ်ဆွေ နိုင်ငံဟူ၍ မရှိဟု ပြောခဲ့သည်။
ယခုအခါ တရုတ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှု ကို တန်ပြန်နိုင်ရန် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများက မဟာမိတ် အသွင် ဖွဲ့စည်းလာနေပြီ ဖြစ်သည် ဟုလည်း ဆိုသည်။ တရုတ်အတွက် မြောက်ကိုရီယားသည်လည်း လက်တွေ့ တွင် သုံးစားမရသည့် နိုင်ငံ မျိုးသာ ဖြစ်ပြီး ရုရှားသည်လည်း လွယ်လင့်တကူ အကူအညီတောင်း၍ မရသည့် မူယာများသော နိုင်ငံသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ တွင် ဗီဒီယို မှတဆင့် ရှီကျင်ဖျင့် ပြောဆိုသွားသည်များမှာ ကိုယ် အကြောင်းကိုယ် သတိမထားမိသည့် လူတဦး ၏ အပြောအဆို များသာ ဖြစ်သည်ဟု လည်း ထည့်ပြောသွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုသည်က တူညီသော ရည်မှန်းချက်မျိုး ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး၊ မိမိ အကျိုးတခုတည်း ကြည့်တတ်မည်ဆိုက မည်သို့များ ဖြစ်လာပေမည်နည်းဟူ၍ မေး ခွန်းထုတ်လိုက်ပြန်သည်။
တရုတ်-အမေရိကန် ပညာရှင်တဦး ဖြစ်သော မိုင်းစ် ယူ သည် ထရန့် အစိုးရ၏ တရုတ်မူဝါဒ ရေးဆွဲရာတွင် အဓိက နေရာမှ ပါဝင်နေသူ တဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ တင်းမာသော သဘော ထားကြောင့် တရုတ်၏ အမျက်တော်ရှခြင်း ခံ နေရသူလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လူရှေ့သူ ရှေ့ ထွက်ခဲလှသူ ဖြစ်သည်ဟုလည်း လူပြော များသူ ဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင် အပေါ် တရုတ်၏ လုပ်ရပ် ကြောင့် တကမ္ဘာလုံးက အယုံအကြည်မဲ့ခြင်း ခံခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီ မှ ဟောင်ကောင် အား တနိုင်ငံ စနစ် နှစ်မျိုးဖြင့် ၁၉၉၇ နောက် ပိုင်း နှစ် ငါးဆယ်ကြာ ကျင့်သုံးသွားမည်ဟု ၁၉၈၄ တွင် တကမ္ဘာလုံးအား အလေးအနက် ကတိပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့‌သော် ဟောင်ကောင် ပြည်သူများက လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိုသာ မြတ်နိုးသူများ ဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ်ဝါဒ နှင့် လူတယောက်တည်းက အုပ်ချုပ်နေသည့် စနစ်ကို ရွေးချယ်လိုသူများ မဟုတ်ကြဟု ဆိုသည်။
ထို့အတွက် တဖက်က အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးနေသရွေ့ မည်သို့မျှ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ခြင်း ရှိမည်မဟုတ်သဖြင့် နဂိုကတည်းက ချွတ်ခြုံကျနေသော အတွေးအခေါ်သာ ဖြစ်သည်ဟု မိုင်းစ် ယူ က ပြောပြန်သည်။
ထိုသို့သော ကတိမျိုးကိုပင် မတည်သော အစိုး ရမျိုးအား ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဖြစ် လက်ခံရန် မည်သို့ ယုံကြည်ရပေမည်နည်းဟု ကနေဒါရှိ တွေးခေါ်မျှော်မြှင်ရေး အဖွဲ့ တခု ဖြစ် သည့် MacDonald-Laurier Institute နှင့် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးခန်းတွင် ပြောသွား ခဲ့ခြင်းများ ဖြစ်သည်။
← လူ (၁၀၀) ခန့် ရန်ကုန်အမျိုးသား ဓာတ်ခွဲခန်းရှေ့တွင် စုဝေးလျက်ရှိ
မနေ့က ပြောသွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းထဲက အရေးကြီးဆုံး အချက်တချက် →